ShwePyiAye – Page 120 – Entertainment & Lifestyle
နောက်ဆုံးတော့ ချစ်သူကိုထုတ်ကြွားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မိစန္ဒီ
By EditorPosted on November 29, 2019 November 29, 2019
မိစန္ဒီဟာ ကလေးလေးလို ချစ်စရာသိပ်ကောင်းတဲ့ ကလေးမျက်နှာနဲ့ ဖြူစင်အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပြီး ဂီတလောကမှာ အခိုင်အမာနေရာတစ်ခုရရှိထားသူပါ။ ဂီတလောကသားတွေရဲ့ လူချစ်လူခင်များပြီး အချစ်ခံရသူလေးဖြစ်တဲ့မိစန္ဒီက တေးသံရှင်တိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေစွာနေထိုင်ဆက်ဆံတတ်ပြီး အလုပ်တွေလည်း အတူတူလုပ်တတ်သလို ရုပ်ချောသဘောကောင်းအနုပညာရှင်လေးမို့ပရိသတ်တွေက လေးစားပြီး အားပေးချစ်ခင်နေကြတယ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ “မင်းရဲ့ မမ […]
ဟာသလူရွှင်တော် ဦးစပ်စုရဲ့ သမီးလေး ပျောက်ဆုံးနေတာပါ ဝေမျှကူညီပေးကြပါဦးဗျာ
By EditorPosted on November 29, 2019
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။မြို့မအမှတ် ( ၁၀)ရပ်ကွက်။ ၉/ ကပတနိုင် ၂၆၆၈၃၀..ကိုင်ဆောင်သောမ ချိုဇင်သွယ်(ခ)မမေကမ္ဘာခင်သည်..၂၇..၁၁.၂၀၁၉.. .နံက် ၉. နာရီခန့်ကဈေးဝယ်သွားရင်းပြန်မလာပါ။ပါသွားသောဖုန်းများကိုဆက်ရာတွင်လည်းမကိုင်ပါသြဖင့််မိဘများအရမ်းစိတ်ပူနေပါတယ်။တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါ။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့။မြို့မအမှတ် ( ၁၀)ရပ်ကွက်။ ၉/ ကပတနိုင် ၂၆၆၈၃၀..ကိုင်ဆောင်သောမ ချိုဇင်သွယ်(ခ)မမေကမ္ဘာခင်သည်..၂၇..၁၁.၂၀၁၉.. .နံက် ၉. […]
ငယ်သူငယ်ချင်း အက်စတာကို ပွဲထဲအထိသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားချော ဖြိုးရာဇာနိုင်
By EditorPosted on November 29, 2019 January 21, 2020
“မျက်လုံးမှာအလွမ်းနှုတ်ခမ်းမှာမာန” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မောင်မြင့်ဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောကျအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ ဖြိုးရာဇာနိုင်ကတော့ ငယ်စဉ်က ဆို၊က၊ရေး၊တီး ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အတူပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းလေး အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန် ကို TV ကနေ တစ်ဆင့်အားမပေးဘဲ ကွင်းထဲအထိသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း “ငယ်သူငယ်ချင်းကိုအားပေးဖို့ ရောက်နေပြီ” […]
သရုပ်ဆောင်နဲ့ အဆိုတော်စမိုင်းလ်ဟာသစ်တံခါး ဆရာတော်ကြီးကို ယုံကြည်သက်ဝင် ကိုးကွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်သလို ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ အဆိုအမိန့်အတိုင်း အဓိဌာန်တွေလည်း အမြဲမပြတ် ဝင်လေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်းစမိုင်းလ်က ဆရာတော်ကြီးမိန့်ကြားတဲ့ လက်ငင်းဖူးချက်ချင်းထူး အဓိဌာန်ကို ဝင်ရင်း သူမ ပရိသတ်တွေလည်း ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင် မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ပြုလုပ်နေတဲ့ […]
ကစ်ကစ်ရဲ့သမီးလေးကို လိုအပ်တာတွေထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဒိန်းဒေါင်
ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့ သမီးလေးအတွက် လိုအပ်တာတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကစ်ကစ်အတွက်လည်း အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေး ဇွန်ပွင့်အတွက် […]
အသည်းရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသလူရွှင်တော် သာဇံ
ကိုစိုးလွင်လွင်ကတောင် ကောင်းကင်ဘုံပေါ်က ချီးကျူးနေမှာလို့ဒိုင်တွေကမှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ အေးမြဖြူ
မြန်မာအိုင်ဒေါလ် Season -4 အစီစဉ်ကြီးကတော့ တစ်ပတ်ထက်တစ်ပတ် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလာသလို တကယ်တော်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် တန်ခွန်ကျော်တောင်ထွက်ခွာသွားရပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်က နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရဦးမလဲဆိုတာ အရမ်းကိုရင်ခုန်စရာကောင်းနေပါပြီ ။ ဒီတစ်ပတ်အတွက် ပြိုင်ရမှာကတော့ တခေတ်တခါက နာမည်ကြီးအဆိုတော် စိုးလွင်လွင်ရဲ့ […]
မြန်မာအိုင်ဒေါလ် ကို ဝင်ကြည့်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
ယမန်နေ့ ကြာသပတေးနေ့ကတော့ အပတ်စဉ် မြန်မာအိုင်ဒေါလ်ရဲ့ performance show ပါ ။ ဒီအပတ်မှာ စုစုပေါင်း ပြိုင်ပွဲဝင် ၇ ဦးဟာ Top7 အတွက် ကို စိုးလွင်လွင်အမှတ်တရသီချင်းများနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်သူတွေ […]